Madaxa bangiga dhexe ee Kenya oo baarlamaanka looga yeeray – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxa bangiga dhexe ee Kenya oo baarlamaanka looga yeeray
Mudaneyaasha aqalka baarlamaanka ee dalka ayaa u yeeray gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ee CBK Dr Patrick Njoroge, si uu sharaxaad uga bixiyo eedeymo loo soo jeediyay.
Mr Njoroge ayaa laga doonayaa in uu xildhibaannada uga war bixiyo arrinta ku saabsan musuqmaasuqii lacag dhan 791 million oo shilin looga qaatay waaxda adeega dhalinyarada qaranka ee NYS-ta.
Gudoomiyaha ayaa la filayaa in uu kasoo hor muuqdo xubnaha gudiga la xisaabsanka ee baarlamaanka oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaanno PAC, si uu tooshka ugu ifiyo doorkii uu bangiga dhexe ku lahaa xaditaanka lacagaasi malaayiinta shilin ah.
Gudoomiyaha gudiga PAC Nicholas Gumbo ayaa sheegay in ay aaminsanyihiin in qasaaraha intaas la e gee soo qaaray NYS-ta uusan djici lahayn hadii uusan waxba ka ogeyn bangiga dhexe.
Mr Gumbo ayaa sheegay in Dr Njoroge ay ka doonayaan in uu siiyo macluumaad dhameystiran oo gacan ka geysan kara baaritaannadooda ku aadan musuqmaasuqa lacagta looga lunsaday waaxda adeega qaran ee dhalinyarada.
Eedeymaha ku saabsan musuqmaasuqa NYS-ta ayaa waxaa dhinaca kale loo maxkamadeynayaa dad loo heysto in ay ku lug lahaayeen, iyadoo cadaadisyo arrintaan ku saabsanna ay horay xilka isaga casishay wasiiraddii wasaaradda dowlad wadaajinta iyo qorsheynta qaranka Anne Waiguru.
← Booliska Mombasa oo ugaarsanaya dad shaqaaleysiin been abuur ah lagaco uga qaata dadka
Weerar lala damacsanaa xarunta ciidamada GSU-da oo la fashiliyay →